Iwe unoda kuziva here wepasi rose chikwereti mamiriro akabatwa nedenda? Iwe unoda kuziva here zvitsva zviri kuitika mune dzimwe nyika? Mutsa tarisa nhau dzeCFM nhasi. | Jesson
Iwe unoda kuziva here wepasi rose chikwereti mamiriro akabatwa nedenda? Iwe unoda kuziva here zvitsva zviri kuitika mune dzimwe nyika? Mutsa tarisa nhau dzeCFM nhasi.
1. Ongororo dzichangoburwa kubva kuInstitute of International Finance dzinoratidza kuti nekuda kwedenda, chikwereti chepasirese chakawedzera neUS $ 24 trillion kusvika pachidimbu US $ 281 trillion muna 2020. Panguva imwecheteyo, chikwereti chepasi rose-kuGDP inopfuura 355%. Chikwereti chehurumende sechikamu cheGDP chakakwira kusvika pa105% kubva pa88% muna2019.
2. United States yakabatana zvakare nechibvumirano cheParis pamusoro pekushanduka kwemamiriro ekunze. Isu Munyori weHurumende Abraham Lincoln akataura mune chirevo kuti Chibvumirano cheParis chiitiko chisati chamboitika chezvekuita. Mushure mekutora mhiko yekutonga musi waNdira 20, Mutungamiri weUS, Joe Biden akazivisa nzira dzinoverengeka dzehutungamiriri, kusanganisira kudzoka kweUnited States muchibvumirano cheParis chekushanduka kwemamiriro ekunze uye kumiswa kwekubuda muWorld Health Organisation.
3. Rover yeku "kutsungirira" yeUS yakabudirira kumhara paMars, ichiva yechishanu yakabudirira kumhara rover yeNASA. Mushure mekumhara, kutsungirira kwakadzosa mufananidzo wayo wekutanga wepasi reMartian, mushure maizvozvo unotora sampuli paMars uye woedza kuwana humbowo hwehupenyu huripo.
4. Zvinoenderana neshumo nyowani yakaburitswa musi wa19 neUMWE Campaign, musangano wepasirese usiri purofiti wakazvipira kugadzirisa hurombo uye zvirwere zvinodzivirirwa, maererano nedata kubva kumakambani mashanu emishonga, Pfizer, Modena, AstraZeneca, Johnson naNovax, kusvika parizvino, United States, European Union, Britain, Australia, Canada neJapan vagamuchira mishonga inodarika mabhiriyoni matatu yenjodzi yeCOVID-19, inodarika miriyoni imwe yebhiriyoni inodarika mabhiriyoni 2.06 anodiwa kuti vanhu vese vari munyika idzi vagamuchire miviri mushonga. Sangano reWorld Health Organisation (WHO) rakakurudzira nyika idzi kuti dzigovane majekiseni ekudzivirira chirwere nenyika idzi.
5. United States yakabatana zvakare nechibvumirano cheParis nezvekushanduka kwemamiriro ekunze. Isu Munyori weHurumende Abraham Lincoln akataura mune chirevo kuti Chibvumirano cheParis chiitiko chisati chamboitika chezvekuita. Mushure mekutora mhiko yekutonga musi waNdira 20, Mutungamiri weUS, Joe Biden akazivisa nzira dzinoverengeka dzehutungamiriri, kusanganisira kudzoka kweUnited States muchibvumirano cheParis chekushanduka kwemamiriro ekunze uye kumiswa kwekubuda muWorld Health Organisation.
6.Vashandi vanomwe pane imwe nzvimbo inogadzira huku yekumaodzanyemba kweRussia vakatapukirwa nehutachiona hwehuswa, rakadaro Sangano renhau reRussia reTASS neMuvhuro. Ino inguva yekutanga kuti chirwere chemunhu cheH5N8 bird flu chiwanikwe muRussia, uye Russia yakazivisa mamiriro aya kuWorld Health Organisation. Nyanzvi dzinoti hapana kumbove nezviitiko zvekutapuriranwa kwevanhu-ku-munhu kweH5N8 bird flu yakawanikwa muRussia. Zvisinei, mukana wekutapuriranwa kwevanhu-kubva-kuvanhu mushure mekushandurwa kwehutachiona mune ramangwana haugone kurambwa.
7. [WTO] mukota yechina yegore ra2020, index yemamiriro ekunze ekutengeserana kwepasi rose muzvinhu yakasvika 103,9, kubva pa100.7 mukota yechitatu. Mushure mekuderera kwakasimba kwekutengeserana kwezvinhu muhafu yekutanga ye2020, huwandu hwekutengeserana kwepasirese muzvinhu hwakwira kubva muchimwiro kubva mukota yechitatu, ichitungamirwa nekutengesa kunze kwenyika kubva kuAsia uye kuwedzera kutengeswa kubva kuNorth America neEurope. Asi iyo rebound inogona kunge isinga gone mukota yekutanga ye2021.
8. Kutanga kubva munaGunyana 1, 2021, Thailand ichabhadharisa mutero unosvika muzana muzana pamitengo yemagetsi kune vese vanoshanda vekunze vanopa masevhisi epamhepo nemari yegore inopfuura makumi matatu nemazana matatu nemakumi manomwe neshanu emari. Hurumende yeThai inotarisira kuti mutero uwedzere mari neinenge 1.1 bhiriyoni yuan mugore remutero ra2021.
9.MuUnited States, pfungwa yekuvapo kwezvakakosha chinangwa chekutora makambani iri kuwedzera nekukwira. Nekuda kwekuwedzera kwechirwere cheCOVID-19, mutemo wepasirese wezvemari wepasi rose wakonzera kuti mari zhinji iyerere mumakambani anokosha ekutsvaga. Kubva 2021, iyo mari yekutora yasvika pamadhora mazana masere nemakumi mashanu, ichiverengera makumi matatu muzana emusika wese wekutenga weUS. Anopfuura mazana matatu makambani anotenga-kunze anotsvaga makambani ari kutsvaga makambani. Huwandu hwemakambani akadaro anonyorwa hwasvika pa 398. muna Ndira chete, makambani makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe akabuda pachena, achiunganidza huwandu hunosvika madhora makumi maviri nemashanu emadhora, achiverengera 60% yeIPO, uye mapurojekiti angangosvika zana akarongerwa kuita IPO.
10. Nyika yeUSA yeTexas svondo rapfuura yakamisa kurambidzwa kwechinguva kune gasi rezvinhu kunze kwenyika, zvichikonzera dambudziko remagetsi muMexico, iro rinonyanya kuvimba nekutengeswa kwegasi chairo kubva kuUS. Mukupindura, Mutungamiri weVenzuelan Maduro akati akaronga kudaidza Mutungamiri weMexico, Lopez uye akarayira kuti Venezuela ivimbise kuunzwa gasi rechisikigo kuMexico. Nekuda kwezvirango zvakamira kwenguva refu kuUS, Venezuela haina zvivakwa zvekushandura gasi rechisikigo kuita gasi rakasanganiswa, Reuters yakataura nyanzvi dzesimba dzichiti.
11. Pamazuva mashoma apfuura, maguta gumi kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweBrazil nyika yeAkre yakawirwa nemafashama, zvichikanganisa zvakanyanya hupenyu hwevanhu vangangoita 130000 mudunhu, uye vanhu vakasiya misha vakaiswa mudzimba dzechinguva dzakagadzwa nezvikoro, dzimba dzekurovedza muviri. nedzimwe nzvimbo. Parizvino, nekuda kwekuderera kwe COVID-19 denda mudunhu, dengue fever kuputika, kudonha padyo kwehurongwa hwekuchengetedza hutano uye huwandu hwakawanda hwevapoteri veHaiti vanopinda muBrazil kubva kumuganhu wenyika nePeru, Akre State yapinda. mamiriro ekukurumidzira muna Kukadzi 16.
Musi waFebruary 21, nguva yemuno, varatidziri vanopfuura zviuru zana vakaungana mudunhu rekuchamhembe kweIndia rePunjab kuratidzira vachipokana nemutemo wehurumende wekurima. Mapurisa emunharaunda akafungidzira kuti kuungana kwekupedzisira kwevaratidziri kwaive pakati pevanhu zviuru gumi nezviviri nemazana mazana matatu. Varatidziri vakadaidzira kuti VaModi vabvise mabhiri ekuvandudza zvekurima akaunzwa munaGunyana apfuura, izvo varimi vaifunga kuti zvinokanganisa zvido zvavo uye zvinobatsira mamwe makambani makuru. Mubatanidzwa wevarimi wakapika kuenderera mberi nekuratidzira kudzamara mutemo uyu wabviswa.
13. Muna 2020, chirwere che COVID-19 chakawedzera chikwereti chepasi rose neUS $ 24 tiririyoni, uye chikwereti chepasi rose chakasvika US $ 281 trilioni, ichiverengera 355% yezvakakomba zvepasi rose (GDP), kuwedzera kwe35% neiyi 2019 yekukura mwero wakakwira zvakanyanya kupfuura muna 2008, pakaitika dambudziko reprime.
14.US Treasure Secretary Yellen: Bitcoin inowanzo shandiswa mari zvisiri pamutemo. Iko kushanda hakuna kukwana. Bitcoin inonyanya kufungidzira. Vashandi vanofanira kuchenjera. Dhijitari mari inogona kutungamira kukurumidza uye kwakaderera-kudhura kubhadhara, asi pane zvakawanda nyaya zvinofanirwa kuongororwa, zvinosanganisira kuchengetedzwa kwevatengi uye kubiridzira mari.
15. Bill Gates: iyo yemagariro midhiya kurambidzwa kunogona kutungamira kumamwe mapoka muUnited States. Hatidi kupatsanura masocial network kuita mapoka maviri, isu tinoda kuve neyakafanana hwaro uye nekutsinhana mazano pane izvozvi.